Напишите полные правила игры в бильярд — американку | Полезная информация для всех
ဂိမ်းပန်းတိုင်: ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက် 8 ဘောလုံး။
အသုံးပြုသောဘောလုံး: အဆိုပါဂိမ်းဆယ်ခြောက်ထုပ်ပိုးစေခြင်းငှါအသီးအသီးသောအဘောလုံး, ဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္တုဘောလုံးကိုကစားနေသည်။
alignment ဘောလုံး: တဆယ်အရာဝတ္ထုဘောလုံးရှေ့ဘောလုံးအမှတ်အသား (တတိယအချက်) ၏နောက်ဘက်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်အတူတစ်တြိဂံပိရမစ်၏ပုံစံအတွက်အနီးကပ်အချင်းချင်းဟုသတ်မှတ်နေကြသည်, ထိုပိရမစ်၏အခြေစိုက်စခန်းဘုတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အပြိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါကန်-off: အကန်အိမ်တော်ထဲကတို့လက်ဖြင့်လုပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအခြမ်းများ၏အပြင်ဘက်ခြမ်း၏အဆက်အဘို့ကိုယျခန်ဓာကိုယူမှတားမြစ်ထားသည်ဤတိုက်ခိုက်မှုမှထွက်တင်ဆောင်လာသော၌တည်၏။ ဘယ်အချိန်မှာမှန်ကန်သောထိုးနှက်ဘောလုံးအိမ်ဆန့်ကျင်ဘက် angular အိတ်ကပ်ထဲမှာကစားများနှင့်မသက်ဆိုင်သူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်အိမ်သူအိမ်သားထောင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာကစားသည့်ဘောလုံးမှလေးစားမှုနှင့်အတူအိတ်ကပ်ထဲသို့ကျသည့်အခါဤအသက်ရောက်မှုသည်အခြားအိတ်ကပ်၏ရလဒ်အဖြစ်ကျဆင်းသွား။
ဂိမ်းထိန်းချုပ်ရေး: သင်သည်အရာဝတ္ထုဘောလုံးအပေါ်မည်သည့်အရာဝတ္ထုဘောလုံးကိုဒါမှမဟုတ် cue ဘောလုံးကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ မလိုအပ်သည့်ကြိုတင်မှာကြားထားဘော်ပြကြလော့။ သငျ့လျြောသောလေဖြတ်အတူအိတ်ကပ်ထဲသို့ပြိုလဲဘောလုံးမဆိုအရေအတွက်ကိုရေတွက်။
အဆိုပါဘောလုံးတွေထဲကဗဟိုလိုင်းကိုကူးခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုအခြမ်းထိမိသို့မဟုတ်ဘောလုံးကိုထိ, အနီးကပ်ဘုတ်အဖွဲ့မှမတ်တပ်ရပ်သို့မဟုတ်အခြားဘောလုံးအားဖြင့်အထံတော်သို့ဆောင် ခဲ့. လျှင်၎င်း,
ဗဟိုလိုင်းနှစ်ခုဘောလုံး (cue ဘောလုံးကိုနှင့်တစ်ခုအရာဝတ္ထုဘောလုံးကို) ဖြတ်ကျော်လျှင်၎င်း,
တဦးတည်းဘောလုံးကိုတဘက်တချက်ကနေရောင်ပြန်ဟပ်နေသည် object တစ်ခုဘောလုံးကိုရိုက်သည့် cue ဘောလုံးကို၏ရလဒ်အဖြစ်နေလျှင်သူသည်အခြားဘက်ခြမ်းထိမိ, သို့မဟုတ်အခြားဘောလုံးအားဖြင့်အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ဒီနည်းလမ်းကိုအာမခံအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုအရာဝတ္ထုဘောလုံးကိုကန်, ဒီဘောလုံးကိုတဘက်တချက်ကနေရောင်ပြန်ဟပ်သောအခါ မှလွဲ. တစ်ဦးထိတွေ့ဘုတ်အဖွဲ့စဉ်းစားသည်မဟုတ်, ကအခြားဘုတ်အဖွဲ့ဆန့်ကျင်ရပ်နေ, ဘောလုံးကိုထိ။
အစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ဘောလုံး: တစ်ဒဏ်ငွေများအတွက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းချွတ်ယူအားလုံးသည်မှားရမှတ်ထွက်ခုန်များနှင့်ပူဖောင်းများ, နီးကပ်သည့် tailgate ၏အလယ်တွင်မှသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအရပ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်သွားလျှင်, ဘောလုံးကိုအနီးကပ်ရောက်စွက်ဖက်အရာဝတ္ထုဘောလုံးကိုမှတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်ဘုတ်အဖွဲ့မှနေရာချသည်, ဘောလုံးကို၏ဘေးဖယ်သည့် setting ကိုလာမယ့်ထိုးနှက်ယူပြီးကစားသမားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ, တရားသူကြီးကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ပြစ်ဒဏ်: တစ်ကစားသမား၏စည်းမျဉ်းများတစ်ဦးချင်းစီကိုချိုးဖောက်သည်တဦးတည်းဘောလုံးကိုတစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ကြာပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုအချိန်တွင်ကစားသမားဘောလုံးဂိုးမပါလျှင်, တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်အပြီးစွဲချက်တင်ပါလိမ့်မည်
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,241 စက္ကန့်ကျော် Generate ။